Mkpọchi mkpọchi nke Australia na -eme ka mgbake maka mgbake njem ụlọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Mkpọchi mkpọchi nke Australia na -eme ka mgbake maka mgbake njem ụlọ
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Iweghachite ụlọ ngwa ngwa n'Australia nwere ike nọrọ n'ihe ize ndụ na ikpe na -aga n'ihu, na mmechi ókèala na -agbatị, n'agbanyeghị na -ewusi ike anụ ụlọ na H1 2021.
Mkpọchi mkpọchi na mmechi ókèala steeti ga -adalata ma belata mgbake njem ụlọ.
Ụgbọ elu Qantas dara ndị ọrụ ya na -egosi atụmanya nke ogologo ụzọ mgbake.
Mmụba nke ọrịa na -ebute ndakpọ ahịa azụmahịa.
na Australia na-alụ ọgụ ịrị elu n'okwu COVID-19, njem ime ụlọ belatara nke ukwuu. Ọ bụ ezie na mgbake ụlọ nke Australia siri ike na H1 2021, mweghachi nke mkpọchi mkpọchi na mmechi ókèala steeti ga -abụ mmerụ ahụ, wee setịpụ ike ma belata mgbake njem ụlọ. Ọzọkwa, Qantas ụlọ ọrụ ụgbọ elu gbadara ndị ọrụ ya na -egosi atụmanya nke ogologo ụzọ mgbake.
Iweghachite ụlọ ngwa ngwa na Australia nwere ike nọrọ n'ihe egwu na ikpe na -aga n'ihu, na mmechi ókèala na -agbatị, n'agbanyeghị na -eme ka agụụ ụlọ dị na H1 2021. nke njem tupu COVID (93.8), mana ụdị delta nwere ike igbochi mgbake siri ike a tụrụ anya ya. Australia abụrụla onye isi na-ejigide COVID-2021 na ọnụ ọgụgụ ọrịa dị oke ala na mgbochi mgbochi mba ofesi siri ike, debere okwu ikpe.
Mmụba nke ọrịa na-ebute ndakpọ azụmaahịa ndị njem, na-adabere ugbu a na ndị njem ụlọ ruo opekata mpe etiti 2022, mgbe oke mba ụwa nwere ike mepee ọzọ. Ọ bụrụ na mkpọchi mkpọchi na -adịgide ma ntụkwasị obi ndị njem adalata, ọchịchọ nwere ike ibelata, mgbake ụlọ nke Australia nwere ike ịgbatị.
Mmachibido mmachi ndị a emeela ka ụlọ ọrụ azụmaahịa njem nlegharị anya nke Australia nwee agụụ, nnukwu ụgbọ elu mba ahụ - Qantas - amalitela ịta ụta ahụ site n'ịkwụsị ndị ọrụ 2,500.
Mgbake Qantas lekwasịrị anya n'okporo ụzọ ụlọ nwere oke ala mechiri emechi. Onye na -ebu ụgbọ ala amalitela nwetaghachi mgbake bara uru, n'agbanyeghị na ịrị elu nke ikpe abụrụla nsogbu. Mbelata mberede na njem ndị ụlọ na atụ anya ịgbatị mkpọchi emeela ka atụmanya nke onye na -ebu ya belata. Omume ngwa ngwa Qantas ga -ebelata ibu ego site na mfu okporo ụzọ yana kwesịrị inye aka chekwaa ọdịnihu nke ụgbọ elu ahụ. Agbanyeghị, mgbake nwere ike ịda mba ozugbo mmachi ebuli elu ka ọ na -ewe oge ịlaghachi ndị ọrụ ma nwee ike belata mbọ ịgbasa.
Ọstrelia adịla ngwa ịgba ọgwụ mgbochi ụmụ amaala ya n'ihi oke ikpe. Agbanyeghị, nke a na -ebute ihe ịma aka ma nwee ike gbuo oge nkwụghachi ụgwọ maka ihe ndị njem ma ọ bụrụ na ntụkwasị obi ndị njem amalite ịdaba.
Ọgwụ mgbochi ahụ emeela ka mba ndị ọzọ nwee ntụkwasị obi wee malite ịkwado mgbake njem. Site na oganihu ịgba ọgwụ mgbochi oke, Australia nọ n'azụ mba ndị ọzọ. Site na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala, ndị njem nwere ike ghara ịla njem na -enweghị ọgwụ mgbochi ebe ọ bụ na ihe egwu adịla ugbu a. Yabụ, mgbake nwere ike gbuo oge ugbu a ruo mgbe mmemme ịgba ọgwụ mgbochi gbakọtara ọsọ ọsọ ma ndị njem Australia nwee obi ike ọzọ.
India ga-esonye na China machibido iwu nzuzo niile…
Ihe ndị dị mkpa maka njikwa ala ọhụrụ: ụkọ ọrụ...
Ọhụrụ na sinima naanị - ekeresimesi na ndị ahọpụtara:…